स्वादैले चर्चित बनेका ९ म:म सेन्टर - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
जसको स्वाद धेरै नेपालीको जिब्रोमा गडेको छ
स्वादैले चर्चित बनेका ९ म:म सेन्टर
सरिता थारू ||4April, 2021
म:म नेपाली जिब्रोमा अत्यधिक गडेको खाने कुरामै पर्छ । नेपालीको सर्वाधिक प्रिय खाजा मानिने म:म बिशेषत: चिसो मौसममा खान अत्यधिक रुचाइने गरिन्थ्यो । तर यसको स्वादले अहिले नेपालीलाई यति मोहनी लगाएको छ कि, यो परिकार बाह्रमासै स्वादिलो मानेर खान थालिएको छ ।
म:म अहिले ठेलादेखि पाँच तारे होटेलसम्मको मुख्य परिकार मानिन्छ । सहरमा खुलेका सबै किसिमका होटेल, रेस्टुरेन्टले आफ्नो मुख्य परिकारमा म:म लाई बनाएर मेनु तयार गरे । म:मको यो मेनुमा समेत विविधता दिन केही होटेल, रेस्टुरेन्ट र म:मका सेन्टरहरूले म:म को परिकारमै विविधता समेत ल्याउन थाले । अहिले म:म स्वाद अनुसारको मात्र नभएर विभिन्न कारणले फरकढंगले स्वाद, रङ्ग, आकारमा पस्किन थालेका छन् ।
मैदा र मासु प्रयोग भएको म:म स्वास्थ्यका लागि राम्रो नमानिने भएकाले घरमै म:म पकाएर खानु राम्रा हुने डा. खड्का बताउँछन् ।
ठेलादेखि पाँच तारे होटेलसम्म एक प्लेटमा १० वटा म:म दिइने कुरामा समानता छ । तर मूल्य र स्वादमा भने एउटा म:म पसलको स्वाद अर्कोमा नमिल्ने म:मका पारखी बताउँछन् । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपालका सचिव राम गुरुङका अनुसार अहिले उपत्यकामा ६ सयको हाराहारीमा रेस्टुरेन्ट छन् । अधिकांश यी रेस्टुरेन्टको मेनुमा म:मले नै राज गरिरहेको छ ।
उपत्यकामा म:मका पारखी जसरी बढे, म:मलाई मुख्य परिकार बनाएर होटेल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्यो । केही होटेल रेस्टुरेन्टले म:मलाई अरू परिकार सरह प्राथमिकता दिएका छन् भने कसैले म:मलाई आफ्नो ब्रान्डकै रूपमा विकास गरेका छन् । यसरी उपत्यकामै म:मको ब्राण्ड बनाउन सफल भएका र चलनचल्तीको भाषामा भन्दा म:म सेन्टरहरू ।
म:म खादा मान्छेहरूले अचार बढी खान्छन् जसबाट नुनको मात्र बढी हुन्छ । यसबाट सतर्क हुनु पर्ने, नेपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा.गुन्जन खड्का बताउँछन्, ‘म:म खाँदा म:मको अचार मिठो भन्दै म:म भन्दा अचार धेरै खाने चलन पनि रहेको छ ।
नारायण दाइको (मासनगल्ली)को म:म
४२ वर्ष अगाडी सञ्चालनमा आएको नारायण दाइको मासनगल्लीको म:म उपत्यकाको चर्चित म:म सेन्टरमा पर्छ । यो म:म सेन्टर सञ्चलनमा आउँदा उपत्यकामा म:मलाई मुख्य ब्राण्ड बनाएर अरू होटेलहरू सञ्चालनमै आएका थिएनन् । स्थापनाकालमा यसको नाम ‘सानदार म:म’ थियो । यसका सञ्चालक नारायण महर्जन थिए । ‘सनदार’ नाममा धेरैले म:म पसल सञ्चालनमा ल्याउन थालेपछि सानदार म:मको नाम परिवर्तन गरेको नारायण महर्जनकी छोरी पुष्पा महर्जन बताउँछिन् ।
४२ लाख लगानीमा उपत्यकामा नारायण दाइको म:मका ७ वटा ब्रान्च रहेका छन् । ७ वटा ब्रान्चमा लगभग ५० जना कर्मचारी रहेका छन् । यस सेन्टरमा तीन प्रकारका म:म पाइन्छ । भेज, चिकेन र बफ । गौशालाको शाखाले मात्र २ देखि ३ सय प्लेट म:म बिक्री गर्ने गरेको छ । यस सेन्टरको म:म बोसोरहित हुने सञ्चालकको दाबी छ ।
दुना टपरी गाँस्न प्रयोग गरिने सालको पातबाट बनेको भाडाको आकारलाई बोता भनिने र उक्त भाडा शुद्ध हुने भएकाले यसको नाम नै बोता राखिएको उनले बताए ।
द बेकरी क्याफे (नाङ्लो)
उपत्यकामा म:म मा चर्चा कमाएको ‘द बेकरी क्याफे’ पनि एक हो । नाङ्लो ईन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडद्वारा सञ्चालित यो क्याफेको १० वटा ब्रान्च रहेका छन् । क्याफेका म्यानेजर सन्दीप आचार्यका अनुसार ३१ वर्ष अगाडी श्यामलाल कक्षपतीले सञ्चालनमा ल्याएको बेकरी क्याफेले म:मका बिशेषतः ४ किसिमका परिकारहरूलाई सर्व गरिरहेको छ । जसमा चिकेन, भेज, बफ र मटन अत्याधिक रुचाइने गरेको छ । यहाँ भेज म:म २ सय २५ रुपैयाँ र अरू ननभेज म:म २ सय ७५ रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ । बेकरी क्याफेको एक ब्रान्चबाट दैनिक २ सय रूपैयाँ प्रति प्लेटसम्म म:म बिक्री हुने गरेको आचार्य बताउँछन् ।
उपत्यकाका चर्चित म:म सेन्टर मध्ये विशाल म:म पनि एक हो । यो सेन्टर सञ्चालनमा आएको १० वर्ष भएको सञ्चालक कुमार कार्की बताउँछन् ।
म:म मन्त्र चर्चित म:म सेन्टरहरू मध्येमै पर्छ । १६ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस म:म सेन्टरलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको भने ५ वर्ष भयो । म:म सेन्टरको नाम जुराउँदै जाँदा युनिक नाम कसरी राख्न सकिन्छ भनेर दार्जिलिङका एक जनाले सल्लाह दिए पछि ‘म:म मन्त्र’ राखिएको यसका सञ्चालक पूर्णबहादुर बल बताउँछन् ।
मध्य बानेश्वरमा रहेको यो म:म सेन्टरमा मसला रहित म:म पाइन्छ । यो म:मले यसका पारखीलाई मोहनी नै लगाउने हुनाले यहाँको म:मको नाम म:म मन्त्र राखिएको बल बत्ताउँछन् ।
सेन्टरमा मसला रहित वफ, चिकेन, भेज र पोर्क गरी ४ प्रकारको म:म पाइन्छ । यसको मूल्य प्रति प्लेट १ सय देखि १ सय ५० रुपैयाँ रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले म:म मन्त्रमा दैनिक १ सय प्लेट म:म बिक्री हुँदै आएको छ ।
सुरुमा म:म सेन्टर सञ्चालन गर्न ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बल बताउँछन् । अहिले म:म सेन्टरलाई व्यवस्थापन गर्न १५ देखि १६ लाख रुपैयाँ लगानी लागेको उनी बताउँछन् ।
एउटै म:म स्टिम, फ्राई, झोल, स्पाईसी गरी विभिन्न परिकारमा बनाइने उनी बताउँछन् ।
नेपाली ब्रान्डको म:मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको क्लासिक ममः सेन्टर पनि चर्चित मानिन्छ । नारायण चौरमा रहेको यस म:म सेन्टर सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । यस म:म सेन्टरका ३ वटा ब्रान्चहरू कोरोना महामारीका कारण बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
म:म सेन्टरका मेनेजर भिमराज गिरीका अनुसार भेज, चिकेन, मटन, फिस, बफ र पार्कका म:म पाइने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै म:म स्टिम, फ्राई, झोल, स्पाईसी गरी विभिन्न परिकारमा बनाइने उनी बताउँछन् ।
ब्राण्ड बनाउनका लागि म:ममा हाईजेनिक सामग्री प्रयोग गरिने उनी बताउँछन् । क्लाासिकको म:म, अहिले प्रति परिकार अनुसार २ सयदेखि ३ सय ९० रुपैयाँ सम्म पर्छ ।
नेपालीको सर्वाधिक प्रिय खाजा मानिने म:म बिशेषत: चिसो मौसममा खान अत्यधिक रुचाइने गरिन्थ्यो । तर यसको स्वादले अहिले नेपालीलाई यति मोहनी लगाएको छ कि, यो परिकार बाह्रमासै स्वादिलो मानेर खान थालिएको छ ।
उपत्यकाका चर्चित म:म सेन्टर मध्ये विशाल म:म पनि एक हो । यो सेन्टर सञ्चालनमा आएको १० वर्ष भएको सञ्चालक कुमार कार्की बताउँछन् । उनी विगत ३५ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा कार्यरत छन् । तर आफूलाई पायक पर्ने विशाल म:म सेन्टरका दुई वटा ब्रान्च मात्र सञ्चालन गरेका छन् । म:म बनाउँदा गुणस्तरीय मासुको प्रयोग हुने उनको दाबी छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित रहेको यस म:म सेन्टरमा पनिर, भेज, बफ, चिकेन लगायतका म:महरु पाइने उनी बताउँछन् । यस म:म सेन्टरमा एक दिनमा ५ देखि ६ सय प्लेट म:म बिक्री हुने गरेको छ । उनका अनुसार म:मको परिकार हेरी प्रतिप्लेट १ सयदेखि १ सय ४० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।
उपत्यकाको चर्चित म:म सेन्टर मध्ये एक हो डल्ले म:म सेन्टर । १० वर्ष अगाडी सञ्चालनमा आएको यस म:म सेन्टरको नाम क्याची बनाउनका लागि नाम डल्ले राखिएको सञ्चालक सुवास गौचन बताउँछन् । यस सेन्टरमा पाइने म:ममा हल्का किसिमको मसलाको प्रयोग गरेको गौचन बताउँछन् । यस सेन्टरमा चिकेन, पोर्क र भेज म:म पाइने उनी बताउँछन् । पोखरामा १, बुटवलमा २ र उपत्यकामा ८ गरी यसका ११ वटा ब्रान्च रहेका छन् ।
यस म:म सेन्टर सञ्चालन गर्न २८ देखि ३० लाख लगानी लागेको उनी बताउँछन् । उपत्यकामा रहेको सेन्टरबाट एकै दिनमा ५ देखि ६ सय प्लेट म:म बिक्री हुने उनी बताउँछन् । प्रति प्लेट म:मको २ सय ७० रुपैयाँ तोकिएको म:मको आम्दानी दैनिक साढे एक लाख भन्दा बढी हुने उनी बताउँछन् ।
यो म:म सेन्टरबाट २ सय ५० प्लेट म:म प्रतिदिन खपत हुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
ठुलेको टपरी म:म
उपत्यकामा चर्चा कमाउन सफल म:महरू मध्ये ठुलेको टपरी म:म पनि हो । ललितपुरको बखुण्डोलमा विगत ४ वर्ष देखि खगेन्द्र रोकाले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सानो उमेरमा सबैले ठुले भनेर बोलाउने हुनाले उनले आफूले खोलेको म:म सेन्टरको नाम नै ‘ठुलेको टपरी म:म’ राखेका हुन् ।
यस म:म सेन्टरले उपत्यकाका १० विभिन्न स्थानमा सेन्टर खोल्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । यस म:म सेन्टरमा भेज, चिकेन र बफको म:म पाइन्छ । एक प्लेट म:म को ७० रुपैयाँ देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए ।
यस म:म सेन्टर सञ्चालन गर्न ३ देखि ४ लाख रूपैयाँ लगानी गरेको उनले बताए । यस म:म सेन्टरबाट मासिक डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने उनी बताउँछन् ।
एभरेस्ट म:म सेन्टर
उपत्यकाका म:म पारखीहरूमा चर्चित रहेको एभरेस्ट म:म सेन्टर नक्सालमा रहेको छ । यो म:म ३२ वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको यसका म्यानेजर तारा श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यो म:म सेन्टरबाट २ सय ५० प्लेट म:म प्रतिदिन खपत हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार यस म:म सेन्टरमा बफको स्टिम म:म मात्र पाइन्छ । हाल प्रतिप्लेट म:म को १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
उपत्यकामा चर्चामा आएको बोता म:म सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । यसका १५ वटा ब्रान्च छन् ।
उपत्यकामा चर्चामा आएको बोता म:म सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । यसका १५ वटा ब्रान्च छन् । बनेपा, विराटनगर र बुटवालमा एक–एक वटा र बाँकी सबै काठमाडौं उपत्यकामा रहेको यसका सिनियर म्यानेजर भुवन आचार्यले बताए ।
निभेन अमात्यले सञ्चालन गरेका यस म:म सेन्टरमा ५० भन्दा बढी म:मका परिकारकाहरु पाइने आचार्यले बताए । उनका अनुसार यो म:म सेन्टर करोडौँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो । यसको एउटा ब्रान्च सञ्चालन गर्न कम्तीमा ७० देखि ८० लाख लगानी लाग्ने उनले बताए ।
यो म:म सेन्टरले प्रतिप्लेट म:म न्यूनतम १ सय ८० रुपैयाँ र बढीमा ३ सय २५ रुपैयाँ पर्ने उनले बताए ।
गहुँको पिठो, ह्वाइट मिट वा छाला नभएको मासु र घरमै भएका मसलाहरू प्रयोग गरी म:म बनाएर महिनाको १ देखि २ पटक खान सकिन्छ ।’
म:म खानु कतिको स्वास्थ्यकर ?
म:म खादा मान्छेहरूले अचार बढी खान्छन् जसबाट नुनको मात्र बढी हुन्छ । यसबाट सतर्क हुनु पर्ने, नेपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा.गुन्जन खड्का बताउँछन्, ‘म:म खाँदा म:मको अचार मिठो भन्दै म:म भन्दा अचार धेरै खाने चलन पनि रहेको छ । यसो गर्दा बढी नुनिलो कुरा खाइन्छ ।
फाइबर नभएको खानेकुराले पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने बताउँदै खड्का भन्छन्, ‘ म:ममा फाइबर भएको कुराहरू केही हुँदैन, आँटा कम हुन्छ, मैदामा फाइबर हुँदैन र भित्र मासु हुन्छ, बेसिकल्ली भेज म:म भए अरू कुरा हो, नत्र सामान्य खाले म:मको मासुमा फाइबर हुँदैन ।’
म:म बनाउँदा मिठो बनाउन फ्याट, तेल र विभिन्न किसिमका मसलाहरू प्रयोग हुने भएकाले म:म स्वास्थ्यका लागि राम्रो नमानिने उनी बताउँछन्, ‘गर्मी मौसममा म:म खानाले फ्याट तथा मसलाका कारणले फुड प्वाइजन हुने, पखाला लाग्ने जस्ता समस्या देखिन्छ ।’
मैदा र मासु प्रयोग भएको म:म स्वास्थ्यका लागि राम्रो नमानिने भएकाले घरमै म:म पकाएर खानु राम्रा हुने डा. खड्का बताउँछन् । ‘गहुँको पिठो, ह्वाइट मिट वा छाला नभएको मासु र घरमै भएका मसलाहरू प्रयोग गरी म:म बनाएर महिनाको १ देखि २ पटक खान सकिन्छ ।’